आज जेष्ठ ३१ गते सोमबार(जुन १४ तारीख) को तपाईँको रा’शिफल : – Nepal Online Khabar
आज जेष्ठ ३१ गते सोमबार(जुन १४ तारीख) को तपाईँको रा’शिफल :
असार २, २०७८ बुधबार 448
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ ३१ गते सोमबार इश्वी सन २०२१ जुन १४ तारीख जेठ शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथी तिष्य नक्षत्र धु्रब योग पश्चात व्याधात योग भद्रा करण चन्द्रमां कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु विश्व रक्तदाता दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवरिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य प्रतिको लगनसिलताको कदर हुने समय रहेकोछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा अधिक समय बित्नेछ । ब्यपार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । मानसम्मान प्राप्तीको समेत योग रहेकोछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) मित्रजनहरुको अधिक सामिप्यता क’ष्टकर साबित रहनेछ । सामान्य पारीवारिक झोरझ’मेलाको सा’मना गर्नुपर्नेछ । यात्रामा पनि साबधानि पूर्वक अघि बढ्नुहोला । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा साजेदारी नगर्नु नै उत्तम रहनेछ । अप्रत्या’शीत खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) वाणी मधुरता छाउनेछ । कला कौशलको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । स्वास्थका क्षेत्रमा पनि सामान्य सुधारको योग बन्नेछ । पारीवारिक साथसहयोगमा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन् । अध्यन अध्यापनमा भने समय त्यति उत्तम रहेको छैन । नयाँ लगानिमा भने सजग रहनु होला ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) आय आम्दानीका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन् । मानसीक त’नाबका कारणले गर्दा कार्य क्षेत्रमा झ’न्झट आई पर्न सक्नेछ । पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला ।
शारीरिक आलस्य’ताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झ’ट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ ।सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) अधुरो यात्रा रहने योग रहेकोछ ।
अरुको छिटो बिश्वास गर्नाले सामान्य धोकामा परिएला । फजु’ल खर्चको योग रहेको छ । मानसिक चिन्ताले सताउनेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा सम’स्या आउन सक्छ ।तपाईको द्वारा सम्पादित कार्यमा त्रु’टि देखाउनेहरुको बृद्यि हुनेछ । स्वास्थमा सामान्य स’मस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) दिदी बहिनीहरुको साथ सहयोगले दीगो फाईदा हुने कार्यको थालनि होला । आक्स्मिक धनलाभको सम्भाबना रहेको छ । बौ’धिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । सन्तान सम्बन्धि समस्याले स’ताउला । रचनात्मक तथा कला क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेको छ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) बिद्यार्थी बर्गको बौधिक बिकाशका निम्ति समय राम्रो रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ । श्रम र मेहेनतको राम्रो कदर हुनेछ भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहने योग रहेको छ । गरीरहेको कार्यका श्रेत्रमा सामान्य ढिलाईको सम्भावना रहेकोछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) ईष्ट मित्रजनको सहयोग प्राप्तहुनाले कार्य सहज रहला । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ । आय आर्जनका निम्ती अधिक श्रम गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आँ’च आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) मानसीक चन्चलताले कार्य क्षेत्रमा झन्झ’ट आई पर्नेछ । सामान्य बा’दबिवादको साम’ना गर्नु पर्ला । मनमा उत्पन्न बिभिन्न कुबि’चारले सम’स्या निम्त्या’उन सक्ला सजग रहनु पर्नेछ । भोजभतेर तथा सभा सम्मे’लन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । बिश्वासिलो ब्यक्तिहरुबाट धो’का हुन सक्ला । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेहरुको सङख्यामा बृ’द्यि हुनेछ । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) अरुको संगतगर्ने बानिले सामान्य समस्या आइपर्ला । कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । पठनपाठनको निम्ति समय राम्रो रहेको छ । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फे’ला परे’तापनि मा’नसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यव’धान आई पर्नेछ ।
Prevथप अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने तयारीमा सरकार ।
Nextमेलम्चीमा होटलको छतबाट सेनाको हेलिकप्टरले गर्‍यो दुई जनाको उद्धार
सनाखत गरिरहेका माधव समूहलाई ओलीको आग्रह- ‘मूल घरमा फर्किनुस्, पूर्वाग्रह राख्दिनँ’ !
मोडल निशा घिमिरेको नि’धन !
दोदामा बाढी : तीन दर्जन घर डुबानमा !